DRAG: mumwe wemitambo yemavhidhiyo yaitarisirwa yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
DRAG: mumwe wemitambo yemavhidhiyo yaitarisirwa yeLinux
KWEVA ndiwo musoro wemutambo wevhidhiyo uyo wanga uchiita "ruzha" kumasocial network kwenguva yakareba. Mutambo wakamirirwa-kwenguva refu uyo ​​vanoda mujaho wemota uye simulators vachada. Uye ikozvino, anomira kuita ruzha kuti atange nhanho nyowani neyake Kutanga Kuwana pane Steam kubva kuValve, kwaunogona kuitenga izvozvi ne € 26,99 ine 10% dhisikaundi yakashandiswa.
Orontes Mitambo yakazoita kuti mafeni amirire zvakare uye yaburitsa DRAG, racing yayo simulator iyo inosanganisa sci-fi neyemberi 4-poindi fizikisi. Rudzi rutsva rwemotokari fizikisi 4CPT-tekinoroji kuti uri kuzochida. Iyo inokwanisa kuenzanisa chimwe nechimwe chinhu chemotokari munguva chaiyo. Unogona kuona mhedzisiro muvhidhiyo inotevera kana kumhanyira kuitenga uye kuzviedza iwe pachako. Asi ini ndatokuudza kare kuti hazvishamise, iine simba chairo uye hunhu nemhando yakakwana yekukuvara.
DRAG inosanganisawo nzira dzakasiyana siyanaUnogona kutamba vatambi vakawanda uchipesana nevamwe vashandisi venetiweki, asi zvakare ine imwechete mutambi modhi kwaunowana kusvika kumatambudziko makumi maviri nemana. Uyezve, inosanganisa arcade racing neyakajeka kutyaira ma mechanics. Uye inogona kushandiswa zvese nekhibhodi uye ne ruffles.
Chimwe chinhu chinoita kuti DRAG inakidze uye isiyanane nevamwe ibasa rinotsvedza, iro rinotendera tevera kutsvedza yeimwe mota kubva padyo kusvika padhuze kuti uwane kamhanyisa uye nekudaro inokwanisa kupfuura. Hausi wega mutambo unobvumidza, asi zvisinei zvaramba zvichikwezva.
Nenzira, mune imwechete-mutambi modhi, matambudziko acho anoshamisa chaizvo. Unogona kudzidzokorora kakawanda sezvaunoda kusvikira iwe waziva iyo track uye ita zvaunogona. Uye kana zvese izvo zvinoita sezvidiki kwauri, panguva Yekutanga Kuwana, vagadziri vayo vanotarisira kuenderera nekuwedzera mota zhinji, makwara mazhinji, Etc.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » DRAG: mumwe wemitambo yemavhidhiyo yaitarisirwa yeLinux
AMD Radeon Software 20.30 - Yakaburitswa yeLinux
Google yakaita kuti zviwanikwa zviwanikwe kune avo vanofarira kugadzira maapplication eChannel OS